Shiinaha Shahaadada Boorsada Boorsada Boorsada Boorsada Shaaha Shandada Midabkeedu Midabkiisu Saaxiibka Leh Yahay | Zhihongda
Shandada Boorsada Boorsada Boorsada Boorsada Boorsada Boorsada dhabarka leh ee midabada leh ee Eco Madoow
Gacanta lagu farsameeyo Shiinaha sidoo kale waa bacaha dharka caadiga ah ee cudbiga-shiraaca leh xargaha. Waxaa loo adeegsaday munaasabadaha isboortiga, wax bixinta ama hadiyadaha xayeysiinta shirkadaha. Boorsooyinkeennu waxay leeyihiin tayo sare waana la dhaqi karaa. Astaamahaaga ama halheyskaaga ayaa si sax ah loogu daabici karaa bacda oo leh midabbo geed caag ah oo aan sun lahayn. Cabirka waa la beddeli karaa waxaa codsanaya macmiilka. Bacda waxaa loo isticmaali karaa boorsada dhab ahaan waana waxtar badan. Xadhkaha cudbi adag ayaa xidhi kara dusha sare.
1. Gacanta lagu farsameeyay Shiinaha sidoo kale waa bacaha dharka caadiga ah ee cudbiga-shiraaca leh xargaha. Waxaa loo adeegsaday munaasabadaha isboortiga, wax bixinta ama hadiyadaha xayeysiinta shirkadaha. Boorsooyinkeennu waxay leeyihiin tayo sare waana la dhaqi karaa. Astaamahaaga ama halheyskaaga ayaa si sax ah loogu daabici karaa bacda oo leh midabbo geed caag ah oo aan sun lahayn. Cabirka waa la beddeli karaa waxaa codsanaya macmiilka. Bacda waxaa loo isticmaali karaa boorsada dhab ahaan waana waxtar badan. Xadhkaha cudbi adag ayaa xidhi kara dusha sare.
2. Isticmaal: Hadiyad Promo, boorsada isboortiga, boorsada iskuulka, boorsada hadiyadaha
3. Gacmo-gacmeed, bey'ad-saaxiibtinimo, xirmo xarig leh oo leh muuqaal lagu qaato boorsadaada, daabacaadda astaanta
4.Customize: Waxaan ku daabici doonnaa astaantaada boorso kasta, cabbirka iyo midabka ayaa sidoo kale loo habeyn karaa
Magaca Shayga Shandada Boorsada Boorsada Boorsada Boorsada Boorsada Boorsada dhabarka leh ee midabada leh ee Eco Madoow
Isticmaalka Dukaameysi, Hadiyad Dalacsiineed, Baako, Bacda Dharka, iwm.
Waxyaabaha Shiraac cudbi ah 100% cudbi, 4-20oz, 100gsm-570gsm, 6oz (175gsm), 8oz (230gsm), 10oz (280gsm), 12oz (340gsm)
Cabir 10x15cm, 15x21cm, 20x25cm 25x30m 30x35cm 35x40cm ama cabbirka la habeeyay.
Midab Midabka Dabiiciga ah, Caddaan, Madow ama loo habeeyay sida aad codsatay.
Xidhitaanka Xadhiga suufka, xadhigga maroojinta, iwm.
Qaabab fidsan, sagxad hoose, hoose wareegsan, hoose laba jibbaaran iyo gusset
LOGO Astaanta kartoo
OEM & ODM Haa, waan aqbalnaa!
Daabacaadda daabacaadda shaashadda xariirta, xarkaha bireed iyo daabacaadda kuleylka, daabacaadda sublimation kaamerada, Daabacaadda Digital, iwm
Soosaar waqti 15-25 maalmood, sida ay tiradaadu tahay.
Xirxirida 200 kumbiyuutarro / kartoon, ama sida ku cad shuruudaha macaamiisha
Habka rarka badda, hawada, xawaaraha
Muunad 1). waqti muunad: Muddo 3-5 maalmood ah.
2). Sample charge: Sida ku cad faahfaahinta sheyga.
3). Lacag celinta saamiga: haa markii tiro aad u badan
4). Gaarsiinta Sample: UPS, FedEx, DHL,
5). Shaybaarkayagu waa bilaash, laakiin waxaad u baahan tahay inaad bixiso xamuulka saamiga
Muddada bixinta 30% deebaaji ah T / T ka hor, 70% dheelitirka T / T ka hor rarka
L / C, D / A, D / P, Western Union, Paypal, Visa, Debit Card, Card Card
Dekedda FOB Chengdu ama Shanghai.
Daabacaadda Silkscreen: codso naqshadda ay ku jiraan midabbo yar.
Daabacaadda Wareejinta Kuleylka: codso naqshadda daboolaya wax yar oo ka kooban midabbo badan.
Daabacaadda Dijital ah: lagu dabaqo naqshadda dabooleysa ballaaran oo ka kooban midabbo badan.
Fadlan noo sheeg shuruudahaaga daabacan ama noo soo dir farshaxankaaga naqshadeynta, waxaan kugula talin doonnaa habka ugu habboon ee daabacaadda adiga.
Caadi ahaan, Waxaan u isticmaalnaa 6oz (175gsm), 8oz (230gsm), 10oz (280gsm), 12oz (340gsm) si aan u sameysano bacda shiraac suuf ah. Waxaad dooran kartaa waxyaabo kale oo dhumuc leh sida aad rabto. Waan ku qancin karnaa dhammaan codsiyadaada.
Waxaad dooran kartaa midabka. Waxaan ku siinnaa shey suuf ah oo midabbo kala duwan leh. Badanaa, Midabka dabiiciga waa caadi. Fadlan noo sheeg midabka aad rabto.
Waxaan sameyn karnaa noocyo badan oo ka mid ah bacda shiraaca suufka ah. Haddii aad naqshad leedahay, taasi waa ka sii fiican tahay. Haddii aadan haysan wax naqshad ama fikrad ah, dhib malahan. Waxaan khibrad badan u leenahay soo saarista bacaha weelka cudbiga ah waxaanan kuusoo bandhigi karnaa talo soo jeedinno adiga ah.
Nidaam Dheeraad ah
Bacaha cudbi / Cawil
Bacaha aan tolmo wanaagsan lahayn
Bacaha meeldhexaadka ah ee dahaaran
BAAS hadiyad ah
Boorsooyinka gawaarida gawaarida leh
Bacaha qurxinta bacaha Musqulaha
1. S: Ma habeyn karaa boorsooyinkayga?
J: Waxaan u sameyn karnaa bacaha si waafaqsan shuruudahaaga.
2. S: Miyaan ku daabacan karaa astaanteena badeecadayda.
J: Haa, Waxaan ku daabacan karnaa astaantaada alaabtaada. Kaliya waxaan kaaga baahanahay inaad ku keento feylkaaga astaanta qaab PDF ama AI ah.
3. S: Waa imisa sheyga?
J: Qiimaha waxaa go'aamiya arrimo fara badan sida maaddada, qaabka, cabbirka iyo iwm Haddii aad ii sheegto shuruudaha alaabada gaarka ah, waxaan kuu soo bandhigi karnaa qiimaha kuugu fiican
4. S: Waa maxay waqtiga wax soo saarku?
J: 15-25 maalmood oo caadi ah, waxay kuxirantahay tirada. Fadlan noo sheeg taariikhda aad rabto, waxaan isku dayi karnaa sida ugu fiican inaan ku qancino.
5. S: Suurtagal ma tahay in la helo muunad ka hor inta aan la dalban?
J: Haa, hubaal, tayada & hubinta alaabada, shaybaarrada keydka oo aan lahayn daabacaad gaar ah ayaa si xor ah loogu bixin karaa koontadaada boostada. Waxaan ku farxi doonnaa inaan kuu soo dirno muunado bilaash ah.
6. S: Mudo intee le'eg ayay ku qaadataa waqtiga soo-saarka saamiga?
J: 1 maalin shaybaarrada jira. 3-5 maalmood oo loogu talagalay shay-baarka habboon.
7. S: Sidee baa amarkeyga loo soo diraa? Boorsooyinkaygu ma ku iman doonaan waqtiga?
J: Badda, hawada, ama kuwa sida xawliga loo qaado (UPS, FedEx, TNT) waqtiga safarka waxay kuxirantahay
8. S: Maxay yihiin shuruudaha bixinta?
A: 30% T / T dhigaalka, 70% dheelitirka kahor dhalmada.
30% T / T dhigaalka, 70% dheelitirka ka soo horjeedka BL.
100% hore, L / C araga, Western Union / Paypal lacag yar oo bixinta.
9. S: Si aad u hesho xigasho, maxay yihiin qaar ka mid ah faahfaahinta lagama maarmaanka u ah inaad noo sheegto?
J: Waxyaabaha, cabirka, qaabka, midabka, astaanta astaanta, cabbirka astaanta, shuruudaha daabacaadda astaanta, tirada, iyo baahiyaha kaleba.
Hore: Bacda dhalada ah ee dharka suufka ah oo tayo sare leh oo Shaqsi ahaaneed
Xiga: Bacda weelka xirmooyinka jeebka xirmada dharka suufka xirmada bacda suufka wax lagu dhejiyo alaabada lagu keydiyo shiraac bacda lagu keydin karo astaan
Eco-Friendly Drawstring Bag Cotton Hadiyad Hadiyad Bag Dra ...
Xayeysiinta xayeysiinta xayeysiinta ee xayeysiinta 12oz co ...
Plain midab daabacan midabkeedu yahay 100% Caw ...
Full daabacaadda cabbirka cabbirka caadiga ah oo buuxa oo daabacan ...
alaabada dukaameysiga alaabada loo adeegsan karo eco saaxiibtinimo ...
bac bulukaati ah oo cad suuf dabiici ah jumlo ...